Neken’ny governemanta ny tolo-kevitry ny Ceni: hotanterahina ny 27 novambra ny fifidianana kaominaly | NewsMada
Neken’ny governemanta ny tolo-kevitry ny Ceni: hotanterahina ny 27 novambra ny fifidianana kaominaly
Raikitra amin’ity taona ity ihany. Hotanterahina ny 27 novambra ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina. Nankatoavin’ny filankevitry ny governemanta, ny alarobia teo, izany.
Niainga tamin’ny tolo-kevitry ny Ceni ny fanapahana noraisina. Na izany aza, nahitsin’ny governemanta ny antsipiriany momba ny daty natolotry ny Ceni. “Hanomboka ny alakamisy 29 aogositra ka hatramin’ny 12 septambra ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina any amin’ny rantsam-mangaikan’ny Ceni eny anivon’ny distrika”. Haharitra 15 andro izany ny fametrahana ny firotsahan-kofidina.
21 andro ny fampielezan-kevitra
Hanomboka ny 5 novambra, haharitra 21 andro ka hifarana ny 25 novambra misasakalina ny fampielezan-kevitra. Andro fahanginana mialoha ny fifidianana, ny talata 26 novambra. Farafahelany, ny 14 janoary 2020 no havokan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana eny anivon’ny faritany tsirairay avy ny voka-pifidianana ofisialy, raha ny tolo-kevitry ny Ceni.
Tsy misy fiovana ny antoka na rotsa-bola haloan’ny kandidà ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, arakaraka ny sokajina kaominina hirotsahany avy. Fifidianana roa samy hafa no hatao amin’io andron’ny 27 novambra io.
Mbola manan-kery ny kara-pifidianana
Tahaka ny mahazatra, nivoaka tamin’ny filankevitry ny governemanta ny fandrarana ny fivarotana sy ny fitsinjarana zava-pisotro misy alikaola manerana ny faritanin’ny Repoblikan’i Madagasikara : Ny talata 26 novambra, manomboka amin’ny 6 ora maraina ka mitohy ny tontolo andron’ny fifidianana, alarobia 27 Novambra 2019.
Natao ho andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny andron’ny fifidianana. Etsy andaniny, mbola manan-kery soa aman-tsara ny kara-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana natao teo aloha.
R.Nd. sy Synèse R.